Burnout Syndrome: Indlela Yokubhekana Nokukhathala Nokunganaki - Psychology 2022
Burnout Syndrome: Indlela Yokubhekana Nokukhathala Nokunganaki
Kuthiwani uma une-burnout syndrome?
Ngokwezibalo, u-64% wabantu base-Ukraine uhlangabezana nokutubeka. Bangu-5% kuphela abantu abathi abazange babhekane nezinkinga ezinjalo.
I-Burnout syndrome yaqala ukuxoxwa ngayo ngasekupheleni kwawo-1970 e-United States. Lesi sifo sivame ukuzwiwa yilabo bantu umsebenzi wabo ohlotshaniswa nokuxhumana okujulile nokujwayelekile: abasebenzi basehhovisi, abaphathi, abathengisi, othisha nodokotela.
Kungani kuvela i-burnout syndrome? Umsuka wenkinga usekungakwazini komuntu ukuhlangabezana nokulindela okuphezulu kwabaphathi, umphakathi, umndeni kanye, vele, umthwalo osindayo.
Ake sibheke izibalo. Ngakho-ke, ama-22% abantu base-Ukraine bathi ukutubeka ngokomzwelo kubangelwa ukunganeliseki ngomsebenzi wabo kanye nokuntuleka kokukhula kwabanakekeli. U-18% wabantu ukholelwa ukuthi izinkinga ezingokwengqondo zidalwa ukungabi nesikhathi sokuphumula nokusebenza ngokweqile, kanti u-16% wokutubeka emsebenzini ubangelwa amaholo amancane.
Uma ujwayelene nale nkinga, ungazinaki izimpawu zokutubeka ngokomzwelo, ngoba zingabangela izinkinga zangempela ngokuphelele. Ngokwesibonelo, ukuncipha kokukhiqiza kungase kuholele ekudilizweni, futhi ukunganaki nokucindezeleka kungase konakalise ubuhlobo bomkhaya.
Iningi labantu libhekene nenkimbinkimbi yezimpawu ezithinta kabi impilo engokomzwelo nengokomzimba. Umuntu ophethwe yi-burnout syndrome uhlangabezana nalokhu:
Ukukhathala okuqhubekayo okungapheli ngemva kokuphumula,
Ubuhlungu bekhanda obuvamile kanye nokuncipha kwesifiso sokudla,
Ukuqwasha kanye nokwanda kwezifo ezihlukahlukene ezingapheli.
Ezingeni elingokwengqondo, izimpawu zalesi syndrome nazo zivezwa kakhulu:
Ukungabi nentshisekelo emsebenzini
Ukuguquguquka kwemizwa njalo
Umqondo ophelele wokukhungatheka empilweni kanye nomuzwa wokuphelelwa ithemba,
Uma uthola izimpawu ezifanayo kuwe, ngokushesha nakekela impilo yakho engokwengqondo nengokomzimba.
Yehlisa umsebenzi wakho uma kungenzeka,
Thatha ikhefu elifushane ngenkathi usebenza futhi uguqule ukugxila kwakho
Thola ugqozi olwengeziwe
Uma kufanele uhlele iphrojekthi enkulu, bese uyihlukanisa ngezigaba futhi ugxile kuyo,
Yiba ngaphandle kakhulu futhi ulethe umsebenzi womzimba empilweni yakho,
Thola ukuphumula okwengeziwe futhi uhlanganyele nabangane nomndeni.
Uma isimo singakathuthuki, kodwa ngokuphambene nalokho, kufanele uthintane nodokotela: udokotela, isazi sokusebenza kwengqondo.